काठमाडौँ, ६ कात्तिक : अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन ल्याइएको ‘शिक्षा (नवौँ संशोधन) विधेयक, २०७४’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता कृष्णमुरारी न्यौपानेका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा, ११३ को उपधारा २ बमोजिम उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको जानकारी द... [...]
सुदूरपश्चिमका १५ क्याम्पसलाई आंगिकता
दार्चुला, ५ कात्तिक : दार्चुला जिल्लाका दुई क्याम्पससहित सुदूरपश्चिमका १५ क्याम्पसले सुदरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिकता पाएका छन् ।
हालसम्म समुदायबाट सञ्चालनमा रहेका गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस गोकुलेश्वर र दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस दार्चुला आंगिक क्याम्पस बनाउनका लागि सरकारबाट निर्णय भइ निर्देशन आएको गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका... [...]
साझा प्रकाशनको विनियम, २०२१ बमोजिम सञ्चालक समितिले मात्र महाप्रबन्धक नियुक्त गर्दै आएकामा शिक्षा मन्त्रालय (शिक्षामन्त्रीस्तर) को निर्णयबाट असोज ९ मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलाई अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेपछि कानुनी विवाद उत्पन्न... [...]
रिडर्स सोसाइटीको अध्यक्षमा लामिछाने
पोखरा, २९ असोज (रासस) : पठन संस्कृतिको विकासको उद्देश्यका साथ क्रियाशील र'याण्डम रिडर्स सोसाइटी अफ नेपालको अध्यक्षमा केशवशरण लामिछाने निर्वाचित हुनुभएको छ ।
सोसाइटीको शनिबार पोखरामा सम्पन्न पाँचौँ अधिवेशनले पत्रकार लामिछानेको नेतृत्वमा दुई वर्षे कार्यकालका लागि एक सदस्य पछि थप्ने गरी १० सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो ।
विद्यालयस्तरीय कविता प्रतियोगितामा
काठमाडौँ, २८ असोज । माध्यमिक विद्यालयस्तरीय राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगितामा धनकुटा पाख्रीबासस्थित राम माविका कुसुम रिजाल प्रथम भएका छन् ।
ब्लड डोनर्स एसोसिएसनले युवा वर्गलाई रक्तदानमा सहभागी गराउने उद्देश्यले “युवाको अभियान, रक्तदानमा योगदान” शीर्षकमा आयोजना गरिएको उक्त प्रतियोगितामा उहाँले रु २५ हजारको नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नु... [...]
सेफको अध्यक्षमा अधिकारी
काठमाडौँ, २८ असोज । सेफ एसोसियसन अफ नेपालले होटल व्यवस्थापनसम्बन्धी तालीम विस्तार गर्ने भएको छ । होटेल व्यवसायमा कार्यरत कुकहरुको सो साझा संस्थाको २३ औँ साधारणसभाले यस क्षेत्रमा दक्ष र शिक्षित जनशक्ति आइरहेको सन्दर्भमा तालीम र प्रशिक्षणलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
सभाले श्रीराम अधिकारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । कार्यस... [...]
पेन्सनबापतको रकम शैक्षिक संस्थालाई
म्याग्दी, २८ असोज । म्याग्दीका एक प्रवासी नेपालीले जिल्लाका शैक्षिक संस्थाहरुलाई रु तीन लाख आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दाना घर भई हाल बेलायतमा बसोबास गर्नुहुने कमलबहादुर पुर्जाले आफूले प्राप्त गर्ने पेन्सनबापतको रकमबाट म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसलाई एक लाख १५० हजार नगद सहयोग गर्नुभएको हो ।
म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) युकेका अध्यक्षसमेत... [...]
काठमाडौँ, २६ असोज । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन विधेयक–२०७४ कार्यन्वयनमा जान नदिने निर्णय गरेको छ । नौ विद्यार्थी संगठनको आज बसेको संयुक्त बैठकले संशोधनमार्फत अयोग्य शिक्षकलाई स्थायी गर्न थालिएको र त्यसले लाखौँ बालबालिकाको भविष्य बिगार्ने जनाउँदै कार्यान्वयनमा जान नदिने निर्णय गरेको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) काउपाध्यक्ष सुरेन्द्... [...]
एजुकेशन इन्टरने... [...]
सर्वप्रथम बालबालिकाहरुको भावना बुझ्न... [...]
बच्चाहरु हुर्काउन विभिन्न खेलाउनाहरु खरिद गर्नुहोस् । हरेक खेलाउनाको प्याकेटमा बच्चाहरुको उमेर तोकेको हुन्छ । जुनअहिलेको मुख्य समस्या... [...]
बच्चाहरुलाई कस्ता लुगा किन्ने ?
बच्चाहरु धेरै छिटो बढ्छन् किन ? हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ । बच्चाहरु धेरै छिटो बढ्छन् । हामीले कतिपय कुरामा अनुभव गरेका छौं कि बच्चाहरुको लुगा, यो हप्ता ठीक भए पनि अर्काे हप्ता छोटो भइसकेको हुन्छ ।
जुत्ताको झन कुरै नगरौ । बच्चाहरुको बढ्दो उमेरसँग खुट्टा पनि यति छिटो बढ्ने हुन्छ कि आज मात्र ठीक हुने जुत्ता, केही दिनमा साँघुरो हुने हुन्छ ।
हामीसँग अरु उपायहरु छन्, जसले हाम्रो... [...]
भक्तपुर । मनिश सुवेदी २०७४ असोज २५
अब वार्षिक दुई हजार पाँचसय प्रिमियम तिरेपछि ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क हुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदले स्वास्थ्य बीमा विधेयक पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
विधेयक प्रमाणीकरणपछि चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । अहिले आठ जिल्लामा स्वास्थ्य... [...]
दिनहुँ विद्यार्थीलाई घरबाट विद्यालय र विद्यालयबाट घरसम्म पु¥याउने चालकल... [...]
(0.013219 seconds )